Nhau - Sei Uchishandisa 144Hz kana 165Hz Monitors?
Paunobvunzwa nezve monitors vese vanehunyanzvi vatambi vanoti vanoshandisa hushoma hwe144Hz ye setups avo. Iko kugona kwekuti iyo skrini izorodze kanopfuura kaviri nekukasira senge yakajairwa yekutarisa inobvumidza vatambi kuti vaite nekukurumidza kune shanduko mumutambo uye zvakare inoderedza kufamba kwekukanganisa uko kunogona kukonzera kukanganisa nekukanganisa mifananidzo inoratidzwa.
Kana vachitaura nezvekugadziriswa, ivo vese vanoti 144Hz yekuvandudza mwero (kana pamusoro) ingori imwe yezvakakosha zvinhu kana uchisarudza yemitambo yekutarisa. Chimwe chinhu chakakosha kugadzirisa. Kugadziriswa kwakakurumbira pakati pevatambi ndeye 1080p nekuti zviri nyore kuwana yakakwira furemu mwero uye saka iwe unenge uchive uchibatsirwa kubva pakakwirira zororo mwero.
Paunenge uchitenga mutsva wemitambo yekutarisa, iwe unofanirwa kufunga kumberi zvakare. Iwe unofanirwa kunangana ne1440p kana iwe uine bhajeti yacho sezvo ichave iri nani mari uye iwe uchiri kugona kuwana yakakwira furemu mitengo. Kugadziriswa kwe1080p kwakanaka kana saizi saizi iri 24 inches. Kune 27-35 inch yekutarisa, iwe unofanirwa kuenda ku1440p uye nezvese zviri pamusoro, 4K UHD ndiyo yakanakisa kudyara.